Ikhabethe lezinkuni elithokomele elinendawo yomlilo kanye nepanorama yaseDanube - I-Airbnb
Ikhabethe lezinkuni elithokomele elinendawo yomlilo kanye nepanorama yaseDanube
I-indlu eyakhiwe ngamapulangwe ephelele ibungazwe ngu-Dora
U-Dora Ungumbungazi ovelele
Ikhabethe lethu le-Danube bend liyindawo ekahle yokubalekela kuzo zonke lezi zinxushunxushu zedolobha elikhulu. Ungakwazi ukumisa izinyawo zakho phezulu phambi kweziko ngemva kokuqwala intaba, upheke ukudla okunezinhliziyo ekhishini noma ushise endaweni yokucima umlilo eseduze.
I-Deer Mountain isekhona kuwe ngalesi sikhathi esinzima. Senza umzamo omkhulu wokugcina ukugcina yonke into ihlanzekile kakhulu futhi ihlanzekile Ezivakashini zethu Zenyamazane. Siphinde sashintshela ekungeneni okuzenzakalelayo.
(I-NTAK reg. no.: MA20008352, uhlobo lwendawo: yangasese)
Itholakala e-Nagymaros, ohlangothini lwe-Blackbird Mountain, enokubukwa okumangalisayo kwe-Danube ne-Pilis, i-Deer Mountain Retreat iyindlu yethu encane enhle. Umpheme ongaphambili uyindawo ekahle yokubuka kokubili ilanga nokuphuma kwenyanga. Indlu itholakala phezulu endaweni eyi-1000m2, ebheke eningizimu-mpumalanga, ibuyela ehlathini lasendle. Indlu ngokwayo yakhiwa ngo-1975 kusukela ezinhlelweni zangempela futhi sesiyilungisile, sakha kabusha futhi saba ngesimanje ngonyaka odlule. Ikhishi elihlome ngokuphelele, ikamelo lokulala elinethezekile, ishawa yemvula, ukukhanya okuklanywe ngokwezifiso kanye neziko kuyimininingwane emincane enezela emkhathini wokuphumula.
Uma ufuna ukwazi okwengeziwe ngempilo yansuku zonke yendlu, sesha i-hashtag ethi #deermountainretreat ku-Instagram.
Ukusuka eBudapest, iNagymaros itholakala kalula ngesitimela (imizuzu engama-50) noma ngemoto (imizuzu engama-40 ku-M2). Kuyisizinda esihle sohambo olufushane nolude, i-Blue Hiking Trails: i-Julianus lookout tower, i-Nagy-Börzsöny ingafinyelelwa usuka e-Kismaros esitimeleni sendawo, esincane, kukhona ichibi lokudoba endaweni, kanye nesikebhe esihleliwe esiya e-Visegrád. , lapho ungavakashela khona kalula inqaba nePilis. I-Nagymaros ifakwe kahle ngezindawo zemidlalo: ungaqasha ibhayisikili, isikebhe kanye/noma i-kayak futhi uzulazule ngokukhululekile imvelo ezungezile.
Kunolwazi oluningi mayelana ne-Nagymaros kanye ne-Danube Bend, uma useshela okuthi "ilovedunakanyar".
Sitholakala ngefoni, ngombhalo noma ngemilayezo ye-aibnb, kodwa unekhabethe uwedwa.
Inombolo yepholisi: MA20008352